By Huawei 5G- inotungamirwa yakasarudzika yemuchadenga & algorithm matekinoroji, Wi-Fi 6 kutevedzana kwezvigadzirwa zveHuawei AirEngine kubatsira mabhizinesi kugadzira maWi-Fi 6 network kubvisa maburi ekuvharira, kupa masevhisi pasina kunonoka nguva, uye kuwana kurasikirwa kwepaketi paunenge uchifamba. Izvi zvinoita kuti nzvimbo dzakasiyana, pamwe nedhijitari airport, dzidzo yedhijitari, omni-chiteshi kudyara, hurumende yakangwara, smart hutano hutano, uye smart kugadzira, kuenda kune yakazara isina waya kambasi zera.
Huawei ndiye mutengesi wekutanga kutenderera zvigadzirwa zveWi-Fi 6 uye uzviise mukushandisa bhizinesi. Kusvika zuva, Wi-Fi 6 Huawei AirEngine APs yakashandiswa munzvimbo shanu kutenderera pasirese.
Semutengesi wepamusoro wezvekufambisa nhare, Huawei akapa zvakawanda maLTE 4G mairaira kunetiweki vanotengesa pasi rese. Uye mazhinji acho anowana kumira kwakakura kubva kumagumo-vatengi sekuenderana nemhando yepamusoro uye kugadzikana kuita. Kuburikidza nemhando yepamusoro yekuita-mutengo, 4G waya dzisina waya dzeHuawei neSIM kadhi & Ethernet chiteshi chinoshanduka kuita mukurumbira kuMiddle East, Asia, Europe, nzvimbo dzeAmerica ne Africa. Iyo 4G Nhare mbozha Huawei maRouters anonyanya kufarirwa nevatengi nekuda kwehunhu hwemhando yepamusoro & dhizaini dhizaini dhizaini muhomwe saizi yekushandisa iri kuenderera.
Nekuwedzera kweasina waya LTE network, Huawei akatopa zvisikwa zveLTE ma routers kuti asangane neazvino LTE Pro Advanced tekinoroji nekuenderana kweakasiyana maneti Uye izvo zvizvarwa zvichangoburwa zveLTE Huawei ma routers ari kutendeuka zvishoma nezvishoma achikura nezvimwe fashoni zvinhu. Iyo inonyanya kukosha ndeye LTE Huawei Router neEthernet port & SIM kadhi slot kana nhare dzeLTE hotspots dzinopa yakavimbika & kugadzikana kuita kune ekupedzisira-vatengi.
Iri bhuku reruoko rinoreva iyo EchoLife HG520s Huawei router, ichiri kushanda kune ruzhinji rweHuawei ma routers pane ese.
Enda kune iyo IP kero router mune yazvino browser browser.
Iyo router's kero yakajairwa yekugadzirisa ndeye 192.168.1.1.
Dzvanya paBasera kuruboshwe ruoko rwepaneru.
Pinda Vhura DNS kero muPuraimari DNS Server uye Sekondari DNS Server minda, wobva wadzvanya bhatani reTumira.
Ingo cherekedza pasi izvo zviripo zveDNS zvisati zvaitika usati washandura kuenda kuVhura DNS, kana iwe uchida kushanyirazve kune zvekare magadzirirwo echimwe chikonzero.
Paunenge uchinge wagadzirisa yako DNS marongero uye wadzvanya iyo Bhatani bhatani, isu zvakanyanya kuraira kuti iwe ubvise iyo DNS resolutionver hoard & web browser hoards kuti uve nechokwadi chekuti yako yazvino DNS yekumisikidza marongero anotora pakarepo mhedzisiro.
Kugadzirisa Nongedzo Matanho
Kupinda kuKushandiswa kweHuawei Router peji rewebhu nekunyora zvinotevera IP mubhokisi reURL: 192.168.100.1. Iyo yekumira default ndeyekuti:
Kufamba kuenda kuLAN> DHCP Kugadziriswa kweSeva
Kutarisa 'Kugonesa yakakosha DHCP server'
Kutarisa Kugonesa DHCP L2 Relay
Famba kumaseva eDNS:
Saka kuti iwe ugone kumisikidza iyo router yeOpenDNS, zvinokurudzirwa zvakanyanya kuti uchenese iyo DNS resolutionver hoard & web browser cache kuti uone kuti izvo zvazvino DNS zvigadziriso zvigadziriso zvinotora ipapo. Uyezve, kana iwe uine Anoshanda IP kero ingoverenga ichi chinyorwa icho chinokutora iwe kuburikidza nekugara uchigadzirisa iyo inoshanda IP kero.
Kungo shanyira: http://www.opendns.com/setupguide/#results Edza izvo zvazvino DNS marongero.
Categories muchiso Post navigation